पाल्पामै बन्यो, मन रुवाउने, सन्देश फैलाउने लघुचलचित्र (भिडियो सहित) – Palpa Samachar
माया बस्याल । पाल्पा
बालबिबाह, लागू औषध, मादक पदार्थका परिवार र ब्यक्तिमा आइलाग्ने समस्याहरुको उठान सहितको सन्देशमुलक लघुचलचित्र भाग्यमानी युट्युव मार्फत सार्वजनिक भएको छ । माथागढी गाउँपालिका बिभिन्न स्थानमा छायाँकन गरिएको लघुचलचित्र भाग्यमानीले सामाजिक जागरणका लागि टेवा पुर्याउने बिश्वास गरिएको छ ।
पाल्पाली शिक्षक तथा कलाकार लोकेन्द्र थापाले उक्त लघुचलचित्रमा निर्देशन गरेका छन् । बाल विवाहले समुदाय र व्यक्तिमा पार्ने असर प्रभावलाई समेटेर उक्त चलचित्र निर्माण गरिएको छ । समसामयिक विषयवस्तुलाई लघु चलचित्रमा उतारिएको यो लघुचलचित्र जिल्लाका बिभिन्न बिद्यालयहरुमा समेत प्रदर्शन गरिने बताइएको छ ।
लघु चलचित्र भाग्यमानीले बाल बिवाह न्यूनीकरणमा बिशेष सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जहाँ बालबिबाह गरेकै कारण मृत्युको मुखसम्म पुगेकी एक जना बाल्यकालकी संगीनी र अध्ययनलाई निरन्तरता दिएका उनकै साथीहरु प्रहरी इन्सपेक्टर, डाक्टर, वकिल र इन्जिनियर बनेर आफ्नो सँगै समाजका लागि योगदान गरिरहेको कथाबस्तु निकै मार्मिक रुपमा उठान गरिएको छ । यो चलचित्रमा सबै कलाकारहरुले राम्रो अभिनय गरेका छन् ।
उक्त चलचित्रमा दिब्य ज्योति माविका प्रधानाध्यापक नारायण अधिकारी, पाल्पाली साहित्यकार तथा शिक्षिका भावना खनाल, सराईका युवाहरु मानध्वज दर्लामी, राजन बलाल, लिल्सन राना, कमलराज आचार्य, मन ब. दर्लामी, टेक ब. थापा, संगीता थापा सारु, सुनिता श्रेष्ठ, पार्वता पोखरेल, मनिषा बस्याल, तुल्सा घर्ती मगर आशा थापा, प्रियंका गाहा, पदमराज पौड्याल, सुर्य सारु, नन्दा पचभैया, अस्मिता ढेंगा लगायतका कलाकारहरुको शसक्त भुमिका निर्वाह गरेका छन् ।
चलचित्रमा कथा लेखन पनि निर्देशक लोकेन्द्र थापाकै रहेको छ । रिड नेपाल र कर्मठ बालिका परियोजनाले निर्माण गरेको चलचित्र परिकल्पना तथा संयोजक कृष्ण थापाको रहेको छ । भने तिन सदस्यीय निर्माण समितिमा कृष्ण थापा, लोकेन्द्र थापा र कपिल प्रसाद पुरी रहेका छन् । प्रविधि प्रमुखमा दिपक श्रेष्ठ र छायांकन योगेश शाक्यले गरेका छन् भने श्रृंगार मनु श्रेष्ठ रहेको छ ।